रुपा र कृष्णले छोरासँग खेल्दै गरे यस्तो भिडियो पोस्ट, एकैछिनमा लाखौंले हेरे (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > रुपा र कृष्णले छोरासँग खेल्दै गरे यस्तो भिडियो पोस्ट, एकैछिनमा लाखौंले हेरे (भिडियो सहित)
admin January 7, 2021 January 7, 2021 जीवनशैली, भिडियो	0
सामाजिक संजा’लमा निकै नै लोकपि्र’य जोडी हुन रुपा र कृष्ण । उनीहरूको जोडीले लोकपि्रयता भने त्यति सजिलो’सँग पाएको भने हैन । उनीहरू’को संघर्षको कथा वास्तवमा जो को’हीको लागि पनि एउटा प्रेरणादायी कथा बन्न सक्छ ।उनीहरूको जोडी मुनामदन को जो’डी जस्तै छ । वास्त’वमा भन्ने हो भने रुपा र कृष्ण क’लियुगका लागि राधा र कृष्णका जोडी हुन भन्दा पनि फरक पर्दैन । **यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला**
उनीहरु अहिले आफ्नो जिवनलाई निकै उत्साहपुर्ण तरिकाले बिताइरहेका छन् । दुर्”घटनामा परि हात र खु’”ट्टा गु”’माएका कृष्णलाई रुपाको त्यो साथ, सहयोग, माया अनि स्नेहले जि’उने आधार बनायो। एक अर्कालाई निकै माया गर्ने यो जोडी’लाई यति ठूलो दु’र्घट’नाले पनि कुनै हाल’तमा छुटा’उन सकेन ।
हात खु’ट्टा गु’माएका कृष्णलाई रुपाले माया, साथ र हौसला दुवै दिइन् ।सामाजिक स’ञ्जालमा चलेको अभि’यानका कारण उनीहरुले आ’र्थिक सहयोग पाए । भर्खरै मात्र यो जोडीको लागि निकै ठुलो खुशी प्राप्त भए’को छ । यी कोमल जो’डीको केही महिना अघि मात्र सन्ता’न प्राप्ती भएको छ । पहिलो सन्तान:को रुपमा उनेहरु’को छोरा भएको छ । यस खुसीलाई रुपाले? सामाजिक संजाल’मा मा’र्फत सेयर गरेकी थिइन ।
छोरा जन्माएपछी रुपा र कृष्णको जीवनमा हर्ष र उमंगले भरिएको छ । छोरा को फोटो र भिडि’योहरु प्राय रुपाले सामा’जिक संजालमा सेयर गरिरहेकी हुन्छिन । त्यस्तै अहिले पछिल्लो समय उनीहरूले छोसंग बनाए:को टिकटि’क भिडि’यो धेरै भाइरल भइरहेको छ ।
यी टिकटक भिडियोहरुलाई धेरै दर्शनहरुके असाध्यै रुचाएका छन, जसरी रुपाले कृष्णलाई अनि कृष्णले रुपालाई रुचाएका छ । अब प्रस्तुत छ सोही भिडियो … जसलाई एक युटुब च्यानल ले टु’क्रा भिडियो बनाएर अपलोड गरेको छ ।
– हेरौं उक्त भिडियो:
खुशीकाे खबर : महिनाको २ लाख कमाइ हुने, श्रमिकले भिसा शुल्क समेत तिर्नु नपर्ने!
माता पाथिभराको दर्शन गर्दै ०७७ साल पौष २४ गते शुक्रवारको हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य !
नायिका मनिषाका बाबु–आमाको वैवाहिक वर्षगाँठमा हिमानी पुगेपछि…
नेपालमै सानी उमेरकि नेपाली चेली सुभानी घिमिरे, यसरी उडाउँछिन आकाशमा जहाज (भिडियो हेर्नुस्)
विहानै मिनभवनमा जेब्राक्रसिङ्गमा मान्छे बचाउन खोज्दा भयो यस्तो दुर्घटना (भिडियो सहित)
२१ वर्षिया चेलीकाे पुछियो सिन्दुर, ३ वर्षको छोरीले ‘बाबा खै’ भन्दा अझै मन थाम्न सक्दिनन् (भिडियो हेर्नुस्)